ကျောင်းသားကျောင်းသူနှင့် ဆရာဆရာမ ၁၀ ဦးကျော် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ရခြင်းဖြစ် - Padaethar
ကျောင်းသားကျောင်းသူနှင့် ဆရာဆရာမများ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရမှု ၁၀ ယောက်ကျော် ရှိလာသောကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာသင်ကျောင်များ ပိတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူများသည့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှဖြစ်ပြီး ဆရာဆရာမများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ပြန်ရောက်လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
“ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောတာကတော့ ၁၀ ယောက်ကျော်ပြီလို့တော့ ပြောတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တချို့နဲ့ ဆရာဆရာမတွေတော့ပါတယ်။ အတိအကျတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ နေ့တိုင်းကူးစက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ….
အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာဆရာမတွေ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်း ပါလာပါတယ် (ကူးစက်ခံရမှုထဲ)” ဟု ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
ကိုဗစ်ဗဟိုကော်မတီက ကိုဗစ်ကပ်ရော ဂါကူးစက်ခံရမှုများထဲတွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူနှင့် ဆရာဆရာမများ ပါဝင်လာသဖြင့် စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ထားရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါများ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုများသည် ဒုတိယလှိုင်းအသွင် ဆောင်လာပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားများပါ ကူးစက်ခံလာရသဖြင့် သြဂုတ် ၂၁ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းများကို ပိတ်ခဲ့သည်။
“ကျောင်းတွေက ကြိုပြီးတော့ ပိတ်တယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီရခိုင်မှာရှိတဲ့ ကျောင်းတွေအားလုံးကို ရခိုင်မှာ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှုတွေရှိသွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက်ကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရက သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ သူတို့ပိတ်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနက ၂၁ ရက်နေ့မှ ရခိုင်က ကျောင်းတွေပိတ်ဖို့ စာထုတ်တယ်။ ဝန်ကြီးဌာနက စာထုတ်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့က ပိတ်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စက ကျောင်းမှာတက်နေရင်းနဲ့ ကူးစက်ခံရတဲ့ သဘောမျိုးတော့ ယူဆလို့ တော့မရပါဘူး။
ကျောင်းမှာသာ ကူးစက်ခံနေရရင် ဒီထက်ပိုပြီးများတဲ့ အရေအတွက် ဖြစ်ဖြစ်လာမှာပေါ့” ဟု ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ဆိုသည်။သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ပြန်လာသည့် မော်လမြိုင်မြို့ ပညာရေးမှူးရုံးမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦးကို ဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ခံလာရကြောင်း သိရသည်။
သြဂုတ် ၂၇ ရက်ကစတင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း ပညာရေးကျောင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း စုစုပေါင်း ကျောင်းပေါင်း ၆၅၂၆ ကျောင်းကို ပိတ်ရန် ကိုဗစ်ဗဟိုကော်မတီက ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းများကို ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဖွင့်ပြီး တစ်လကျော် အကြာတွင် ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများ ရှိလာ၍ ပြန်လည်ပိတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှတစ်ဆင့် ပြည်တွင်း ကူးစက်မှုများ စတင်သည့် သြဂုတ် ၁၆ ရက် မှစတင်ပြီး ၁၂ ရက်အတွင်း ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၂၄၅ ဦးဝန်းကျင် ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။Eleven Media Group
ကြောငျးသားကြောငျးသူနှငျ့ ဆရာဆရာမမြား COVID-19 ရောဂါ ကူးစကျခံရမှု ၁၀ ယောကျကြျော ရှိလာသောကွောငျ့ တဈနိုငျငံလုံးရှိ စာသငျကြောငျမြား ပိတျရခွငျးဖွဈကွောငျး အခွခေံပညာ ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဒေါကျတာတငျမောငျဝငျးက ပွောသညျ။
COVID-19 ရောဂါ ကူးစကျခံရသူမြားသညျ့ ကြောငျးသူ ကြောငျးသားမြားသညျ ရခိုငျပွညျနယျမှဖွဈပွီး ဆရာဆရာမမြားသညျ ရခိုငျပွညျနယျမှ ပွနျရောကျလာသူမြား ဖွဈကွောငျး ဒေါကျတာတငျမောငျဝငျးက ပွောကွားသညျ။
“ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ပွောတာကတော့ ၁၀ ယောကျကြျောပွီလို့တော့ ပွောတယျ။ အဲဒီထဲမှာ ကြောငျးသူ ကြောငျးသား တခြို့နဲ့ ဆရာဆရာမတှတေော့ပါတယျ။ အတိအကတြော့ ကြှနျတျောမသိဘူး။ နတေို့ငျးကူးစကျနတေဲ့ အခွအေနတှေဖွေဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ….
အရမျးကွောကျဖို့ကောငျးတဲ့ အခွအေနေ ဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဆရာဆရာမတှေ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှလေညျး ပါလာပါတယျ (ကူးစကျခံရမှုထဲ)” ဟု ဒေါကျတာတငျမောငျဝငျးက ပွောကွားသညျ။
ကိုဗဈဗဟိုကျောမတီက ကိုဗဈကပျရော ဂါကူးစကျခံရမှုမြားထဲတှငျ ကြောငျးသား ကြောငျးသူနှငျ့ ဆရာဆရာမမြား ပါဝငျလာသဖွငျ့ စာသငျကြောငျးမြား ပိတျထားရနျ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနသို့ ညှနျကွားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ကိုဗဈကပျရောဂါမြား ကူးစကျပြံ့နှံ့မှုမြားသညျ ဒုတိယလှိုငျးအသှငျ ဆောငျလာပွီး ကြောငျးသူကြောငျးသားမြားပါ ကူးစကျခံလာရသဖွငျ့ သွဂုတျ ၂၁ ရကျတှငျ ရခိုငျပွညျနယျ အတှငျးရှိ စာသငျကြောငျးမြားကို ပိတျခဲ့သညျ။
“ကြောငျးတှကေ ကွိုပွီးတော့ ပိတျတယျလို့လညျး ပွောလို့ရပါတယျ။ ဒီရခိုငျမှာရှိတဲ့ ကြောငျးတှအေားလုံးကို ရခိုငျမှာ ပွညျတှငျး ကူးစကျမှုတှရှေိသှားတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရကျကတညျးက ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရက သူတို့အစီအစဉျနဲ့ သူတို့ပိတျပွီးသား ဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ဝနျကွီးဌာနက ၂၁ ရကျနမှေ့ ရခိုငျက ကြောငျးတှပေိတျဖို့ စာထုတျတယျ။ ဝနျကွီးဌာနက စာထုတျတဲ့အခြိနျမှာ သူတို့က ပိတျပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီကိစ်စက ကြောငျးမှာတကျနရေငျးနဲ့ ကူးစကျခံရတဲ့ သဘောမြိုးတော့ ယူဆလို့ တော့မရပါဘူး။
ကြောငျးမှာသာ ကူးစကျခံနရေရငျ ဒီထကျပိုပွီးမြားတဲ့ အရအေတှကျ ဖွဈဖွဈလာမှာပေါ့” ဟု ဒေါကျတာတငျမောငျဝငျးက ဆိုသညျ။သွဂုတျ ၂၅ ရကျတှငျ ရခိုငျပွညျနယျမှ ပွနျလာသညျ့ မျောလမွိုငျမွို့ ပညာရေးမှူးရုံးမှ လကျထောကျ ညှနျကွားရေးမှူး တဈဦးကို ဗဈကပျရောဂါ ကူးစကျခံလာရကွောငျး သိရသညျ။
သွဂုတျ ၂၇ ရကျကစတငျပွီး တဈနိုငျငံလုံးတှငျ ဖှငျ့လှဈထားရှိသညျ့ အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျး၊ ဘုနျးတျောကွီးသငျကြောငျး ပညာရေးကြောငျးနှငျ့ ပုဂ်ဂလိကကြောငျး စုစုပေါငျး ကြောငျးပေါငျး ၆၅၂၆ ကြောငျးကို ပိတျရနျ ကိုဗဈဗဟိုကျောမတီက ညှနျကွားခဲ့သညျ။
တဈနိုငျငံလုံးရှိ အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးမြားကို ဇူလိုငျ ၂၁ ရကျတှငျ ဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီး ဖှငျ့ပွီး တဈလကြျော အကွာတှငျ ပွညျတှငျးကူးစကျမှုမြား ရှိလာ၍ ပွနျလညျပိတျရခွငျးဖွဈသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှတဈဆငျ့ ပွညျတှငျး ကူးစကျမှုမြား စတငျသညျ့ သွဂုတျ ၁၆ ရကျ မှစတငျပွီး ၁၂ ရကျအတှငျး ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ ၂၄၅ ဦးဝနျးကငျြ ရှိလာခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။Eleven Media Group
ရစရာရှိတဲ့အကြွေး သိန်း (၂၀) ပြန်မဆပ်ရင်တောင် အလှူတွေလုပ်ပြီး ဇာတ်ပို့တွေကိုအလုပ်ပေးနေတဲ့သူကို သွားမစော်ကားပါနဲ့လို့ မင်းခန့်ကျော်ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ နေဒွေး